Vaovao - lafin-javatra folo miantraika amin'ny maha-marina ny milina ny ampahany marina
Lafin-javatra folo misy fiatraikany amin'ny marina machining ny faritra marina
Araka ny fantatsika rehetra, ny antony mahatonga ny fanodinana ireo faritra marina dia antsoina hoe milina mazava tsara satria ny fomba fitantanana sy ny fepetra takiana dia avo dia avo, ary ny fepetra takian'ny vokatra dia avo dia avo tokoa, ary ny fizotran'ny fanodinana ireo ampahany marina dia misy ny marina ny toerana. Ny refin'ny habe, ny endriny araka ny tokony ho izy, sns., Ny tonian-dahatsoratra dia mamintina ireto lafin-javatra folo manaraka ireto izay misy fiatraikany amin'ny fahamarinan'ny fanodinana ny ampahany.
(1) Ny fihodinan'ny fihodinan'ny fitaovana milina dia mety hiteraka hadisoana sasany amin'ny fahamendrehan'ny masinina.
(2) Ny tsy fahatomombanan'ny lalamby fitarihan-dàlana ho an'ny milina dia mety hiteraka lesoka ihany koa amin'ny endrik'ireo ampahany marindrano namboarin'ny workpiece.
(3) Ny ampahany amin'ny fandefasana dia mety hiteraka lesoka ihany koa amin'ny fanodinana workpiece, izay koa ny singa manan-danja indrindra amin'ny lesoka amin'ny workpieces.
(4) Ny karazana fitaovana sy ny fitaovana isan-karazany koa dia misy fiatraikany samy hafa amin'ny fahamarinan'ny sangan'asa.
(5) Amin'ny dingan'ny famolavolana sy ny fanapahana, noho ny fiovan'ny toeran'ny teboka misy ny herin'ny hery, hiova ny rafitra, izay hiteraka fahasamihafana, ary mety hiteraka ambaratonga fahadisoana samihafa ihany koa amin'ny maha-marina ny sangan'asa.
(6) Ny herin'ny fanapahana samihafa dia misy fiantraikany amin'ny fahamarinan'ny workpiece.
(7) Fahadisoana nateraky ny fiovan'ny toetr'andro ny rafitry ny fizotrany. Mandritra ny fanodinana mekanika, ny rafi-pandaminana dia hamokatra fiovana hafanana sasany eo ambanin'ny asan'ny loharano hafanana isan-karazany.
(8) Ny fahasimban'ny rafitra fikirakirana noho ny hafanana dia matetika miteraka ny fahamarinan'ny sangan'asa.
(9) Ny fahasimban'ny fitaovana milina noho ny hafanana dia hahatonga ny workpiece ho simba.
(10) Ny fiovan'ny toetr'andro fitaovana dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny workpiece.
(11) Ny sangan'asa mihitsy dia novain'ny hafanana, izay ateraky ny hafanana mandritra ny fanapahana.